Ukutya ukutya kwabasetyhini abakhulelwe ukulahleka kwesisindo
Kukho uluvo lokuba owesifazane okhulelweyo kufuneka adle yena kunye nosana lwakhe. Abafazi abanjalo abacetyiswa ukuba badle ngokutya, kuba oku kunokuchaphazela kakubi impilo yabo kunye nentlalo yabantwana. Kwabesetyhini abakhulelweyo, kunokutya okukhethekileyo ekulahlekeni kwesisindo, oko kuya kwenza ukuba kube lula kwaye kulungile.
Iyintoni ingozi yobunzima obunzima kwesi sikhundla?
Amakhilogremu angaphezulu anokuchaphazela uxinzelelo lwegazi. Kukho ukuvuvukala, kwaye kumchamo kubonakala iphrotheni .
Kwindoda ekhulelwe, umsebenzi wezitho zangaphakathi unokuphazamiseka, kunye nokuguga kwangaphambili kwepentecenta.
Umntwana usenokufumana ukusilela kwe-oxygen.
Ngokuqhelekileyo, amakhilogremu angaphezulu ancedisa ekuphuhliseni umntwana omdala.
Ukuzalela abafazi abanjalo kunzima kakhulu kwaye kunokwenzeka ukuba, umntwana uya kuthwala.
Ukuze ugweme oku, kuyimfuneko ukulandela ukutya okuchanekileyo kokulahleka kwesisindo.
Kucacile ukuba umfazi okhulelweyo uya kufumana ikhilogram eyongezelelweyo, kodwa kungakanani oku kuthathwa njengesiqhelo. Umzimba ngamnye wesibini ngumntu ngamnye kwaye ubunzima bufakwe kwizinto ezahlukeneyo. Ngokomyinge, eli xabiso lihluka phakathi kwe-10-14 kg.
Ukutya okusebenzayo kwabasetyhini abakhulelweyo
Xa uqulunqa ukutya, cinga ngezi ngcebiso ezilandelayo:
Umlinganiselo ofanelekileyo weeprotheni ungama-110 g weprotheni, apho i-gram 20 yeemvelaphi zezityalo, kunye nezinye izilwanyana, umzekelo, i-cottage cheese, inyama kunye nentlanzi.
Amafutha kufuneka agqitywe kwi-100 g, apho i-20 g kufuneka ibe yintlobo yemveliso.
Ubungakanani be-carbohydrates efunekayo ngu-400 g. Phakathi kokukhulelwa, ukunciphisa le mali ukuya kuma-300 g, udle isonka esincinane kunye noshukela.
Kufuneka udle amaxesha amahlanu ngosuku, kwaye iziqephu zingabi zikhulu kakhulu.
Inani elipheleleyo leekhalori kufuneka lihlulwe ngolu hlobo lulandelayo:
isidlo sakusasa - 30%;
yesibini isidlo sakusasa - 10%;
ngesidlo sasemini - 40%;
i-snack - 10%;
isidlo - 10%.
Kamva, ngaphezu kweeyure ezingama-3 ngaphambi kokuba ubuthongo lungcono ukuba ungadli, ukuba uziva ulambile, uphuze i- kefir .
Iimveliso zokupheka kufuneka zichaneke. Kukulungele ukuqhuba umlotha, kwi-oven, ukupheka okanye ukupheka.
Kunconywa ukunciphisa inani letyuwa elidliwe, malunga no-6 g ngosuku.
Ungalibali ukusela amanzi, imihla ngemihla malunga neelitha eziyi-1.5.
Ukongezelela, kuyimfuneko ukuthatha amalungiselelo akhethekileyo amancititamin kunye namaminerali.
Umzekelo wesondlo somfazi okhulelwe kwisisindo esikhulu
Ukusetyenziswa kwansuku zonke kweemveliso ezilandelayo:
Isixa sesonka kunye nokupheka ngu-150 g.
Kubalulekile ukusebenzisa izitya zokuqala, kukulungele ukunika ukhetho lwakho kwisobho, kufika kwi-200 g. Pheka isobho kwiimifuno kunye ne-croup okanye ipasta. Ungawuzalisa ngekhilimu omuncu kunye nemifuno.
Umlinganiselo wenyama kunye nentlanzi kuvunyelwe ngu-150 g.Ekuqaleni kungcono ukuyilisa, kwaye ke ubhake okanye ulungiselele i-jellied.
Ukuba ngokuqhelekileyo uthwala iimveliso zobisi, ke inani elivumelekileyo labasetyhini abakhulelwe ngu-200 g. Nika ukhetho lwakho kumveliso kunye nomxholo weoli ophantsi.
Yidla ipharha, kunye ne-pasta, kodwa kuphela kwizinto ezincinane. Qiniseka ukuba udle imifuno, imifuno kunye neziqhamo. Kwakhona avunyelwa amaqanda ama-2 ngeveki.
Phuza itiye, izandi zendalo kunye neentlobo ezahlukeneyo.
Ukukhulula ukutya kwabesetyhini abakhulelweyo
Ukukhulula iintsuku kuyimfuneko kubasetyhini abakhulelweyo, abasanda kukhulula. Ungasebenzisa olu khetho rhoqo kwiintsuku ezili-10. Ezi zifana zithandwa kakhulu:
Ukukhulula kwi-kefir - usuku ofuna ukusela 1.5 ilitha.
Ukukhulula kwiipulo - ngosuku uvumelekile ukuba udle kwi-1.5 kg.
Ukukhulula kwi-curd - ngosuku ongadla ama-600 g we-cottage cheese uze uphuze iikomityi zeeyi ezimbini.
Kefir ukutya kukaLarissa Dolina
Ukutya ngeqela legazi-inkcazo ecacileyo
Ukutya kunye nokuvutha kwe-gallbladder
Ukutya kwi-oatmeal porridge
Ukutya kwe-Pelmeni ukulahleka kwesisindo
Ukutya kuka-Inna Volovichova ngeentsuku
Ukutya kunye ne-gastritis nge-acidity ephantsi
Yintoni engcono yokulahlekelwa ubunzima - PP okanye BUCH?
Ukutya okutywala - indlela yokumelana noko unokusela?
Digan Fox Diet
Vinaigrette - recipe
I-Trout ibhaka kwi-foil
Ungakhetha njani i-sofa?
Ukuhlaselwa kwentliziyo epheleleyo - indlela yokusebenza ukuze usinde?
UAnthony Hopkins ebusheni bakhe
Ithebhulethi imele ngezandla zakho
Ioli yeRosemary - iipropati kunye nezicelo
Iindlela zokukhula kweeyela ekhaya
Amadoda Intlanzi ngobudlelwano
Indlela yokudweba intwasahlobo yabantwana?
I-ointment kwizinto kunye nezibazi
Ibhasika kwi yogurt - iresiphi
Periodontitis - unyango
Yintoni eluncedo kwierberberries zasendle?
I-"Rooster" eyenziwe ngesandla eyenziwe ngamabhodlela eplastiki
Uyakupheka njani ibhola yezilwanyana kunye neeruba?
Ingulube yasePuinea yaseGuinea